Serasera.org - Blog: juin 2009
Fametrahana ohabolana amin'ny blaogy blogger.com
Azonao atao ny mametraka ohabolana izay hiova isanandro eo amin'ny blaoginao.
Raisintsika ohatra ny blaogy ao amin'ny blogger.com izay manana fitaovana tsotra hampisehoana ny atao hoe fahana RSS.
Raha hametraka ohabolana miova isanandro ao amin'ny blaoginao ianao dia midira ao amin'ny toerana fikirakirana ny endrika
Publié par Eugene Heriniaina à 6/27/2009 09:28:00 AM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Libellés : fanoroana
Efa nanandrana nampiditra tononkira?
Raha manana 5 minitra kely ianao ka te hampiditra tononkira ao amin'ny tononkira.serasera.org dia ity misy fomba iray azonao atao... tsotra dia tsotra:
1. Jereo aloha ny lisitry ny hira miandry ao amin'ny Radiovazogasy.com Jereo eto dia mifidiana hira iray izay tianao hampidirina ny tononkira.
2. Jereo ao amin'ny tononkira raha toa ka mbola tsy ao ilay hira nofidinao Jereo eto ny lisitry ny hira. Raha efa ao dia mifidiana hira hafa indray.
3. Mandraisa penina sy taratasy, na koa omany ny ordinatera hanoratana azy.
4. Andraso ao amin'ny Radiovazogasy ilay hira. Tsindrio ny bouton play eto ambany dia andraso handeha ilay hira.
5. Rehefa mandeha ilay hira dia azonao tsindriana ny Pause rehefa manoratra ianao dia manindry Play indray rehefa hanohy
6. Ampidiro ao amin'ny tononkira.serasera.org amin'izay Jereo eto raha hampiditra tononkira.
Publié par Eugene Heriniaina à 6/22/2009 09:40:00 AM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Libellés : radiovazogasy, tononkira
Attaque 17 juin 2009
Tratran'ny attaque DDOS indray ny serveur iray an'ny serasera alina. Ny serveur principal no tratra. Nijanona daholo noho izany ny ankamaroan'ny site miafara amin'ny serasera.org afatsy ny forum satria ny forum natokana serveur fa mbola mavesatra.
Efa handeha hatory aho alina, namitavita zavatra kely, tamin'ny 1 sy sasany maraina, no nahazo email tampoka avy any amin'ny OVH milaza fa no-désactiver-ny ny serveur satria "hijacked". Izany hoe tafiditry ny pirate (foza orana grrr) dia tsy voatantana ara-dalàna intsony. Nomeny rohy fotsiny aho hakàna ny zavatra izay azo alaina sisa ao. Nanomboka teo dia ni-activer ilay serveur iray fiandry aho dia nafindra tao izay tokony azo afindra. Maraina ihany ny andro vao vita daholo.
Amin'izao izaho manoratra izao dia efa mandeha ny sites goavana. Ny sites madinika sasany mbola tsy no-activer-na satria mila jerena hoe taiza no nahatafidirandry zalahy "foza orana" (Ambohitsirohitra sa Iavoloha lol)
UPDATE: Tsikaritro io maraina io fa données tamin'ny 17 jiona tamin'ny 1 ora maraina no farany voatahiry ka naverina nampidirina. Ny zavatra rehetra nampidirina tao amin'ilay serveur nandritra ny andron'ny 17 jiona izany dia tsy voatahiry avokoa. Ireto avy izany zavatra izany:
- Hafatra sy sary ary namana vaovao tao amin'ny namana.serasera.org
- Namana vaovao vao nisoratra anarana tao amin'ny vavahady.serasera.org
- Tononkalo vaovao sy hevitra tao amin'ny vetso.serasera.org
- Tononkira vaovao sy hevitra tao amin'ny tononkira.serasera.org
- Sarintava vaovao tao amin'ny avatar.serasera.org
- Lahatsoratra vaovao tao amin'ny blaogy.com
- Ohabolana nampidirina ny 17 jiona
Miala tsiny raha nisy fiantraikany taminareo ireo zavatra ireo.
Publié par Eugene Heriniaina à 6/18/2009 09:04:00 AM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Libellés : attaque, olana
Ny avatar no fototry ny olana omaly: voahitsy
Efa nampoiziko ihany hoe hivika ny serveur vokatry ny avatar satria isaky ny mitranga ny sary anakiray dia misy query mysql vitsivitsy. Mandalo controller sy model normal mantsy ilay avatar dia miantso queries amin'ny database na dia tsy ilainy akory aza. Tsy ilainy satria efa en cache daholo ny sary aorian'ny nanamboarana azy.
Hatramin'ny androany izany dia isaky ny misy avatar iray mivoaka dia tahaka ny manokatra ny takelaky ny avatar.serasera.org ihany. Rehefa miha mitombo ary ny mpampiasa sarintava, ka mitombo koa ny site hahafahana mametraka sarintava dia niakatra be ny connexion t@ mysql dia tratran'ny "too many connections" aho. Dia nijanona ny mysql ho an'ny sasany.
Amin'izao ary dia tsy mandalo controllers sy models intsony ny avatar fa tonga dia mampiseho ilay sary amin'ny alalan'ny lien direct. Raha manokatra sary http://avatar.serasera.org/9e9b2fd0c6f1ac3acb05a54e904a4b83.jpg izany dia tonga dia ilay fichier 9e9b2fd0c6f1ac3acb05a54e904a4b83.jpg mihitsy no sintomina fa tsy mandalo controller mijery ny uri intsony.
Mba hanaovana an'izay dia novaina ny .htaccess mba hijery avy hatrany hoe aiza ilay sary... fa tsy handalo base de données intsony.
Vokany, nihena be 95% ny utilisation base de données avy amin'ny avatar.serasera.org dia milamina indray ny serveurs.
Sarin-tava farany hitako izao:
Publié par Eugene Heriniaina à 6/16/2009 09:27:00 AM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Libellés : avatar, olana